Funga Sa A Hacker! - Semalt Expert Anotsanangura Nzira Yokudzivirira Nayo Website Yenyu
Nhau dzekutsvaga webhusaiti ndezvenhau yose zuva rega rega. Mamiriyoni epa data anogumamune vanosemesa maoko avo vanokanganisa data, vanobira vadzidzisi ruzivo nezvimwe zvinhu zvinokosha zvinokonzera kuvharwa kwekuzivikanwa dzimwe nguva. Ndizvozvisingazivikanwi nevakawanda kuti webhusaiti dzekushandura inoita sei kutenderwa kusina kodzero yemakombiyuta avo - champiro 70.
Jack Miller, nyanzvi kubva Semalt ,yakagadzirisa ruzivo rwakakosha kupfuura ruzivo rwekudzingirira kuti iwe urove kutambudzwa.
Zvakakosha kunzwisisa kuti webhusaiti yevheji vanoziva kuvaka kwesite yakawanda kupfuura web developers. Vanonzwisisa zvakanaka nzira mbiri yekufambisa kwenhare iyo inobvumira vashandisi kutumira nekugamuchira detakubva kumaseva pavanokumbira.
Kuvaka kwezvirongwa uye mawebsite kunotora zvinyorwa zvido zvevashandisi izvoinoda kutumira uye kugamuchira kwedata. Vashandi veWebhu vanoziva kuti vashandisi vewebhu vanoita mawebhusayithi ezvitengesi zvekutsvaga vanovabatsirakubhadhara michina mushure mekunge vaiswa mumotokari yekutengesa. Apo vateereri vewebhu vanovaka mapurogiramu, ivo vanofungisisa nevatengi vavouye vanokundikana kufunga nezvekutyisidzira kwekodhi infiltrations nevanowona nezvewebsite.
Vanotsvaga webhusaiti vanoziva kuti nzvimbo idzi dzinoshanda kuburikidza nemapurogiramu achikumbiraruzivo uye kuita zvinogamuchirwa pamberi pekubudirira kwekutumira kutumira-kugamuchira nzira. Dhiyabhorosi yeiyo inopindirwa muchirongwa, inonzi yakaipakuvimbiswa, ihwo ruzivo rwekutanga shure kwekunyengedza. Izvo zvinoitika apo data yekupinza haina kufanana nekutarisira maererano nedeveloper's designed code..Nharaunda yehuwandu huckers inoshandisa nzira dzakasiyana siyana dzekupa maitiro asina kukodzera kumapurogiramu anosanganisirakutevera nzira.
Iyo inozivikanwawo sekurwisa kwekunze, kuchinja kwepakiti kunosanganisira kurwisa kwedhairitransit. Mushandisi kana mutungamiri webhusaiti haazi kuona kurwisa panguva yekushandurwa kwe data. Pakugadzirisa kwekutumira komunhuchikumbiro che deta kubva kumutevedzeri, web hackers anogona kuchinja data kubva kumushandi kana sevhare kuti awane kodzero dzisina kubvumirwa. Packetkugadzirisa kunonziwo Man mu Middle Middle.
Dzimwe nguva vashandisi vepawebsite vanogona kuwanika pakombiyuta vashandisi kuburikidza nekuchengeta zvakashatanhamba kumaseva akavimbwa. Iyo yakaipa code inopikisa vashandisi kana mirairo ichikokwa muComputer PC nekudhonza pazvikwata kanadownloaded in files. Zvimwe zvinowanzobatwa nekurwisana kwepasitendi zvinosanganisira nzvimbo yekukumbira nzvimbo yekugadzira uye nzvimbo-script-scripting.
Website hackers inogona kutungamirira chimwe chezvinhu zvinoparadza zvikuru nekurwisa asevha kurwisa masayiti. Vanokuvadza vanoona kushungurudzwa pane sevha uye vanoishandisa kuti vashandise hurongwa uye vanoita kodzero dzekutungamirira dzakadarosefaira rinoshandiswa. Vanogona kuita zvakadai sematambudziko akakura ekuzivikanwa kwekuvharwa uye webusaiti yezvinyorwa.
Kudzivirira Kubva paIndaneti Hackers
Vashandi vekutsvaga webhusaiti vanofanirwa kufungidzira sevaseki. Vanofanira kufunga nezvenziramazano avo anowanzoshungurudzwa kune webhusaiti pavanenge vachivaka nzvimbo. Vanokudziridza vanofanira kuumba nheyo dzinotora magwaro matsva nekupukunyukavanhu vanonyanya kuverenga uye dzimwe nheyo dzekudzivirira kuti varege kuwana mirairo inokuvadza kubva kune vekushaya mawebsite. IGET uye POST mapiratiro ezvirongwaanofanira kunge achigara achitarisa.
Web application firewalls zvinogonawo kuvimbisa kuchengetedzwa kubva kune zvishomanana nevanoshungurudza webhusaiti.Iyo moto unodzivirira purogiramu yepurogiramu nekuiwana iyo kubva mukugadzirisa sezvo inoramba kubatikana. A cloud-based firewall application inonziCloudric iyi yekudzivirira moto kwekupedzisira kwehutete hwehutano.